व्रतमा किन खाइन्छ सिधे नुन ? – Khabar Silo
धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि पवित्र महिना, साउन । यस महिनामा भगवान शिवको पूजा आराधना गरिन्छ । शरीर र मनलाई शुद्ध गरेर ब्रत बस्ने, मनलाई भक्ती–भजनमा लगाउने, दान दिने गरिन्छ ।
साउनको महिनामा व्रत बस्दा आफ्नो कामना पुरा हुने धार्मिक विश्वास छ । त्यसो त वर्षायामको यो समयमा व्रत बस्नु शारीरिक हिसाबले उत्तिकै फाइदाजनक पनि छ । यतिबेला हाम्रो पाचन यन्त्र कमजोर हुने, खानेकुराको माध्यामबाट संक्रमण फैलिने जस्ता कारणले व्रत बस्नु उपयोगी हुने बताइन्छ ।
ब्रतको आ–आफ्नै विधी विधान छन् । व्रतका केही प्रकार छन् । कतिपय व्रतमा अन्न, पानी सेवन गरिदैन भने, कतिपय व्रतमा अन्न मात्र त्याग्ने गरिन्छ ।
व्रतको क्रममा सिधे नुन भने सेवन गरिन्छ र यो आफैमा फाइदाजनक पनि मानिन्छ । व्रतमा किन सिधे नुन खान हुन्छ ?
के हो सिधे नुन ?
सिधे नुनको रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो । यो रंगहीन एवं सेतो हुन्छ । अहिले यो हल्का निलो, गाढा निलो, रातो, पहेंलो पनि हुने गरेको छ । सिधे नुन सबै नुनभन्दा राम्रो मानिन्छ । आयुर्वेदमा समेत यस नुनको उपयोगिताबारे उल्लेख छ ।
व्रतमा किन खाइन्छ ?
आयुर्वेदमा सिधे नुनलाई सबैभन्दा शुद्ध र हल्का मानिन्छ । यसले पाचन प्रक्रियालाई पनि दुरुस्त राख्छ । शरीरलाई सितल राख्न सहयोग गर्छ । यो प्रशोधन नगरिएको हुँदा यसमा रहेको पोषक तत्व जस्ताको तस्तै प्राप्त हुन्छ । व्रतमा हामीलाई धेरै पोषणको आवश्यक्ता हुन्छ । यसमा रहेको म्याग्नेशियम, क्याल्शियम, आइरन र जिंकले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यस नुनमा सोडियमको मात्रा कम हुने र पोटाशियमको मात्रा बढी हुन्छ । यही कारण यो नुन सेवन गर्दा रक्तचाप पनि नियन्त्रित हुन्छ ।
व्रतमा नुन सेवन नगर्दा आयोडिनको कमी हुने गर्छ । साथसाथै मांशपेसीमा पनि असर पुग्छ । त्यही कारण सिधे नुन सेवन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
पाचन पक्रियाका लागि सबैभन्दा उपयोगी मानिन्छ, सिधे नुन । यसका साथै प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउनका लागि पनि यो नुन उपयोगी हुन्छ । सिधे नुनले हाम्रो शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सलाई सन्तुलित राख्छ, जसले व्रतको क्रममा हामीलाई उर्जा दिन्छ ।
सिधे नुनले शरीरमा फ्याट सेल्स कम गर्छ । शरीरको विषाक्त तत्व बाहिर निकाल्छ । सेरोटोनिन र मेलाटोनिन हर्मोनलाई सन्तुलित राख्छ र हाम्रो तनावको स्तर कम गर्छ । साइनस, अस्थमा, आर्थराइटिस र स्टोन जस्तो रोग निको बनाउन समेत सहयोगी मानिन्छ ।
आयोडिनयुक्त नुन जस्तै सिधे नुन पनि खानामा प्रयोग गरेर सेवन गर्न सकिन्छ । आफ्नो स्वाद अनुसार खानामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छौ । किन हुन्छ टन्सिल ? हाम्रो जिभ्रोको […]
जसले हाँस्न जान्दैन, उसले बाच्न पनि जान्दैन भन्ने उखान सबैले सुन्नु भएकै होला । हाँस्ने बानी सबैको हुन्छ । दिनमा कति र कुन समयमा हाँस्ने भन्ने नियम छैन । कुनै रमाइलो कुरामा जिस्किदा, साथीहरुबीच ठट्ठा गरेर कुराकानी गर्दा वा चुड्किला सुन्दा मानिसलाई हाँसो लाग्छ । कुनै पनि कुरामा रमाइलो मानेर हाँस्दा हामीले अन्य कुरा क्षणिक […]
छिट्टै नै हुन्छन् ग’र्भवती यी ३ प्रकारका महिला , बच्चा जन्माउनमा लाग्दैन समय
आजको वर्तमान समयमा धेरैजसो महिलाहरु छिट्टै गर्भवती हुने गर्दछन् । भने कुनै महिलाहरुलाई गर्भवती हुन धेरै नै समय नै लाग्ने गर्दछ । आज हामी यही विषयमा नै जान्ने कोहीस गर्र्नेे छौ त्यस्ता महिलाहरुको बारेमा जो छिट्टै गर्भवती हुने गर्दछन् । तथा उनीहरुलाई गर्भवती हुनमा धेरै समय लाग्दैन । आउनुहोस् यसको बारेमा विस्तृत रुपमा जानौँ । […]